Parenting Archives - Page 2 of 3 - Daryeel Magazine
QURUXDA QOYSKA: Astaamaha Waalidka Wanaagsan
Caruurtu waa quruxda lamaanaha isguursaday, lamaane kasta waxa ay jecel yihiin inay arkaan caruurtooda, ubadku iyo xooluhuba waa qurux ka mid ah quruxda aduunka taal. Ubadku waa quruxda qoyska. Ubadku waxa ay u baahan yihiin barbarbaarin wanaagsan, sida in lagu barbaariyo diin iyo dhaqan wanaagsan. Barbaarinta caruurta waxay ka mid tahay hagaajinta bulshada iyo qaranka, hadii aad caruurtaada si wanaagsan …
Mushkiladaha laga yaabo in badan oo hooyooyinka ka mid ahi in ay ku dhaqmaan iyaga oo aan dareensanayn halista ay ku leedahay caafimaadka nafsiga ah ee ilmaha waxa ka mid ah iyaga oo aan ubadkooda ku barbarin deggenaanta iyo wax u fiirsiga iyo iyaga oo ku badiya cayda iyo canaanta. Dr. Ihaab Ciid oo ah khabiir Mac-hadka daraasaadka caafimaadka carruurta …
Mar kasta oo waalidka gaar ahaan Soomaalida ah ee gudaha jooga laga codsado I aanu ilmihiisa ciqaab jidheed iyo mid nafsi ah u geysan ereyga ugu horreeya ee afkiisa ka soo baxaa waa, “Markaa ilmuhu marka uu qaldamo side la odhanayaa? Haddii mar loo digo marka uu qaladku soo noqnoqdo maxaa lagu samaynayaa? Marar bay dhacdaaba in isaga oo kugu …
QURUXDA QOYSKA: Fadlan Aabo Jooji Qaadka
Quruxda Qoyska waa filimo taxane ah oo wacyigelin ah oo ay kooxda Samo ugu talo galeen waalidiinta soomaaliyeed. Ka bogasho wacan:
Faaidada Kalluunku U Leeyahay Caruurta Yaryar
Professor Hildegard Bertsrempel oo ku xeeldheer nafaqaynta iyo faa’idooyinka cuntada ayaa waalidiinta kula talisay in ay ku dadaalaan in ubadkooda ay toddobaad kasta laba jeer siiyaan mar ama laba jeer qiyaas ah 25 illaa 35 giraam oo kalluun ah midkiiba. Hildegard oo ah bare-sare oo jaamacadeed waxa ay sheegtay in kalluunku uu hodan ku yahay maaddooyinka iodine oo Soomaalida qaarkood …
10 Sababood Oo Keena In Caruurtu Ay Waxbarashada Nacaan
Waxaa marar badan dhacda in qoysaska iyo macallimiintuba ay ka cawdaan mushkilad dunida aad ugu soo badanaysa oo ah in ardayga yari uu waxbarashada niyadda ka sii jeediyo ama uu dugsiga tegitaankiisaba naco. Qormadan oo aynu soo turjunay waxa ay khubarada arrimahan ku xeel dheeri kaga waramayaan sababaha keeni kara dhibtan, taas oo marka la garto fure u noqon karta …
Ilaahay ayaa mahad iska leh, nabi Muxamedna nabad galiyo iyo naxariis korkiisa haa ahaato. Waxaad maalmahan moodaa in ciyaalkii Muslimiinta la dhahay cuna, cabba oo seexda, waxay la midtahay fulaynimo oo waxay noqonayaan kuwo bas ka cararaya xabada!!! Caajislow aan damiir lahayn, dadaal lahayn, mashaqeyste ah, ku nool dadka kale xoolahooda, dhaca dadka kale, aan aqoonin xalaasha iyo xaaraanta, aan …
Si Aad U Dhisto Maskaxda Ilmahaaga, Tillaabooyinkaan Raac
Xilliga ugu badan ee maskaxda ilmuhu kortaa waa Afarta sano ee ugu horreeya cimrigiisa. Marka la is barbar dhigo koritaanka maskaxda ee 4 sano ee u horreeya iyo inta ay maskaxdu korto inta hadhay ee nolosha qofka waxa ay khuabrada caafimaadku caddeeyeen in Afartaa sano ay korto boqolkiiba 50, boqolkiiba 50 ka hadhayna ay korto inta hadhay ee cimriga qofka. …
Sida la wada ogsoon yahay bulshadu waxa ay ka kooban tahay qoysas, qoysaskuna waa afraad ka kooban waalid iyo ubadkooda. Haddaba wanaaga ama xumaanta ay bulsho leedahay waxa u sees ah qoysaska ay ka koobantahay. Taas macnaheedu waxa weeyaan hadii qoysaska bulsho ka kooban tahay wanaagsanaadaan waxa hubaal ah in bulshadaasi horumar ilbaxnimo ku dheehan tahay gaadhayso, sidoo kale hadii …
Ma ogtahay in hadii caruurta oo hurudda la qaado si joogta ah habeen walba ay ka qaado sas iyo hadar ay gaadhaan hadhaw inay kacaan ama had hadlaan iyagoo hurda sidaa darteed ka ilaali marka hore in ilmuhu seexdo meel aan ahayn meeshii uu seexan jiray ee caadiga ahayd. Ma ogtahay in hadii ilmaha lasiiyo cunto isagoo kayar 4 bilood …
Qodobadan hoose waxa ay suuragalin karaan in uu ilmahaaga yari noqdo mid naftiisa ku kalsoon oo mustaqbalkiisa si hagaagsan ugu hore marsanan karo, dhamaan Qodobadanna waa kuwa adiga waalidka ah lagaa doonayo in aad ilmaha usameyso ilmuhuna uu ugu guuleysto, 1-ilmahaaga ku amaan caruurta kale hortooda 2-ha uhorseedin in uu naftiisa dhaliilo 3- ku dheh fadlan 4-sidii ilmo ula dhaqan …
Waxay ogyihiin waqtiyada ay ubadkooda la qaadanayaan nolosha: Waalidka wanaagsan waxa uu ka fikiraa goorta uu ubadkooda la qaadanaayo waqtiga, si kasta oo uu waqtigu u dhaafaba, waxaanay ka warwaraan mar kasta oo ubadkoodu sii koraan sida uu waqtiga ula sii qaadan lahaa, iyaga oo cuntada meel kula cuna, isla markaana daryeela marka ay qaan gaadhaan baahiyaadkooda nololeed. Ma fududa …
Asalamu Caleykum Dhamaan, Maanta halkan waxaan ku soo qaadanayaa mawduuc muhiim u ah nolosheena dhamaan, kaas oo ah tarbiyada ubadka iyo Guriga, sidaa wada ognahayba, halka u horeysa ee ubadku ka helo tarbiyada waa qoyska gudihiisa iyo aqalka, hadba sida ay tahay akhlaaqda aqalka taalaa ayuunbuu ilmuhu dibada ula soo baxaa,. Sida diinteena Islaamka ahi ee qiimaha lihi ina fareyso …
Astaamaha Lagu Garto Aabaha Wanaagsan
Ku dadaal in qeybo badan oo ka mid ah qoraalkan aad ku sifoowdo Insha Allaah,Waxa hubaal ah in markaas aad tahay aabe wanaagsan 1) Waxaa lagu yaqan inuu yahay qof Ilaahay kabaqa, Rasuulkiisana raaca. 2) Wuxuu aad uga warqabaa baahida reerkiisa: xagga diinta, maalka, ama mooraalka. 3) Xaaskiisu way ku faraxdaa marka uu guriga soo galo. 4) Waa kan dhisa culuumta …
Mawduucan waxaan doonayaa in aan kaga hadlo wixii alle iga garansiiyo bal sida ugu fiican ee aynu caruurta u tarbiyadayn karno. Waxaa mawduucan igu kalifay markii aan arkay hooyooyin badan oo ubadkii ay dhaleen caayaaya, dadka ku diraaya, xakhalaaqdiisa aan ka warhayn. Yaa marka hore ka mus’uul ah tarbiyada caruurta? Waxaa si toos ah uga masuul ah tarbiyada caruurta qofkii …